တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် ချထားပေးသည့် အခန်းများကို ပြန်လည် ငှားစားထားပါက အရေးယူသွ?? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် ချထားပေးသည့် အခန်းများကို ပြန်လည် ငှားစားထားပါက အရေးယူသွ??
တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် ချထားပေးသည့် အခန်းများကို ပြန်လည်ငှားစားထားသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအား အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသော ဆရာ၊ ဆရာမများကို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်းနေထိုင်နိုင်ရန် အမည်ပေါက်ဖြင့် အိမ်ခန်းများချထား ပေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အချို့သော ဆရာ၊ ဆရာမများက ယင်း အခန်းကိုနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်းများ၊ နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သော့ပိတ်ထားခြင်းများ ရှိနေသည့်အတွက် အခန်းပိုင်ရှင်များကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”လူမနေဘဲ သော့ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းတွေကို ပြန်သိမ်းမယ်။ ပြီးရင် တက္ကသိုလ်အလိုက် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေကို ပြန်ပြီးခွဲပေးမယ်။ အိမ်ခန်းတွေကို ပြန်ငှားစားထားတဲ့ သူတွေကိုတော့ အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပြီး အိမ်ခန်းချထားတဲ့ စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်မယ်။ နောက်လိုအပ်လာရင်လည်း ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်ရှိ အမည်ပေါက်မဟုတ်ဘဲ နေနေတဲ့သူ တွေကိုတော့ ဧပြီလလောက်ဆင်းခိုင်းမယ်”ဟု အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်း များနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ၁၂ ထပ်တိုက်များကို လှိုင်တက္ကသိုလ် နယ်မြေအတွင်းတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံအမျိုး အစားများကို ခုနစ်ခန်းတွဲ၊ ၁၅၆ ခန်းပါဝင်သော ၁၂ ထပ်တိုက် နှစ်လုံး၊ ခုနစ်ခန်းတွဲ အခန်းပေါင်း ၁၆၂ ခန်းပါဝင်သော ၁၂ ထပ်တိုက် နှစ်လုံး၊ အခန်းပေါင်း ၆၃၂ ခန်းပါဝင်သော ရှစ်ခန်း တွဲ ၁၂ ထပ်တိုက်ခုနစ်လုံးနှင့် တစ်ထပ်ခွဲရှိသော Community Center တစ်လုံးတို့ပါဝင်ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”ဆောက်နေတာတွေလည်း ပြီးသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ နောက် ထပ်အသစ်ထပ်ချပေးဖို့တွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီတစ်ခါ အိမ်ခန်း တွေပေးတဲ့အခါကျရင် တစ်ဦးချင်းမပေးတော့ဘူး။ သက်ဆိုင် ရာတက္ကသိုလ်အလိုက်ရတဲ့ ခွဲတမ်းတွေကို တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲ ရေးအဖွဲ့တွေကနေတစ်ဆင့် ချပေးလိမ့်မယ်”ဟု ယင်းကဆက် လက်ပြောကြားသည်။ မတ် ၁၆ ရက်က အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(အောက် မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ)တွင် အိမ်ခန်းများနှင့်ပတ်သက်သော အစည်း အဝေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုလ ပထမအပတ်ကလည်း အိမ် ခန်းများနှင့်ပတ်သက်သောစစ်ဆေးမှုများ ရှောင်တခင်ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံကြီးများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်ပရင်းန
တရုတ် - အီဂျစ် ပူးတွဲကာ ဆူးအက် စီးပွားရေးဇုန် ဖော်ဆောင်မည်
တောင်ပြိုဝဲ-ဘူးသီးတောင် သွား ကားလမ်းပေါ်၌ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလ??
အဖျက်အမှောင့် သတင်းများ ထွက်နေသဖြင့် စစ်တွေမြို့ အရေးကြီး ၁ဝ နေရာတွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင်
ကယားပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မ္မတ အဆင့်အထိ တည်းခိုနိုင်သည့် ဟိုတယ်အပါအဝင် ဟိုတယ် ၁ဝ လုံး တိ?
တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာကြောင့် မန်စီးတီးနောက်ခံလူ ဂျွန်စတုန်း တစ်လကျော် နားရမည်